FANATSARANA NY TONTOLON’NY FITSARANA : Omena fiofanana ireo mpiasa, hamafisina ny fanaraha-maso
Isan’ny rafitra iray mbola ahitana tahana kolikoly ambony ny eny anivon’ny Fitsarana sy ny fandraharahana ny fonja na ny eto an-drenivohitra izany na ireo any amin’ny Faritra hafa ivelan’Antananarivo. 15 mai 2019
Ankoatra io kolikoly io dia mbola olana ihany koa ny fotodrafitrasa izay tsy mahasahana intsony ny isan’ireo voafonja. Hiatrehana izany indrindra dia nisy ny fanamafisana orina sy fihaonan’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitsarana izay notarihan’ny talen’ny kabinetran’ny minisitera tamin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy hitondrana fanatsarana misimisy kokoa mahakasika ireo sehatra ireo.
Tafiditra ao anatin’ny fifanarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny minisitera, araka izany ny fanomezana fampiofanana ireo mpandraharaha rehetra eo anivon’ny Fitsarana ary hisy toy izany ihany koa ny fanapariahana ireo fitaovana fanaraha-maso ny tontolon’ny Fitsarana toy ny “Camera de surveillance” sy ireo maro hafa manerena ny Nosy. Ankoatra izay dia hatsaraina ny fitantanana ny fonja, havaozina ireo fotodrafitrasa sy toeran’ny voafonja ary hotolorana fampitaovana mifanaraka amin’ny toetr’andro ny mpiandry fonja.